Rehefa mampiasa an'ity tranonkala ity ianao dia manaiky fa azonao ny politikanay ary ekenao izy ireo.
Ity tranonkala ity dia tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny sy hetsika noforonin'ny mpampiasa eo amin'ilay tranonkala.
Manaiky ianao ary manaiky fa ny atiny rehetra (lahatsoratra sy haino aman-jery) ampitaina ampahibemaso na ampitaina dia anjaran'ny tsirairay no mandefa ny atiny fa tsy ity tranonkala ity.
Ity tranonkala ity dia manana ny zony hanampy, hanala na hanova ny endri-javatra amin'ny tranonkala amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana na tompon'andraikitra.
Tompon'andraikitra amin'ny hetsika ataonao an-tserasera sy ny tsiambaratelo momba ny mombamomba anao ianao.
Ity tranonkala ity dia manan-jo hanala ny atiny izay mahatafiditra mpitsidika sary vetaveta hafa, fanavakavaham-bolon-koditra, fiheverana diso tafahoatra, herisetra, fankahalana, fitenenan-dratsy, na tsy misy lanjany lehibe.
Ity tranonkala ity dia manan-jo hanala ny adihevitra manafintohina sy tsy mendrika.
Ny fandefasana spam sy fampiroboroboana tena mivantana dia tsy zakan'ity tranonkala ity ary hesorina.
Tsy azonao ampiasaina ity tranokala ity hizarana na handefasana zavatra tsy ara-dalàna na fampahalalana na handefasana amin'ireo tranonkala izay manao ireo hetsika ireo.
Anjaranao ny manamarina izay fisintomana rakitra raha misy viriosy, trozona, sns.
Tompon'andraikitra amin'ny hetsika sy hetsika ataonao amin'ity tranokala ity ianao, ary azonay atao ny mandrara ireo mpampiasa mandika ny fepetra momba ny serivisy.
Tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny solosainao ianao. Manoro hevitra izahay ny hametraka programa fiarovana virosy azo itokisana.
Ity tranonkala ity dia mampiasa Analytics fitaovana handinihana ireo mpitsidika sy fifamoivoizana. Ity fampahalalana ity dia ampiasaina hanatsarana ny atin'ny tranokala.
Ny atiny rehetra omena ato amin'ity bilaogy ity dia ho fampahalalana fotsiny. Ny tompon'ity bilaogy ity dia tsy milaza momba ny maha-marina na feno ny fampahalalana rehetra amin'ity tranonkala ity na hita amin'ny alàlan'ny fanarahana rohy rehetra amin'ity tranonkala ity. Ny tompon-trano dia tsy tompon'andraikitra amin'ny hadisoana na fanadalana amin'ity fampahalalana ity na amin'ny fisian'ity fampahalalana ity. Ny tompon-trano dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fatiantoka, ratra, na fahasimbana amin'ny fampisehoana na ny fampiasana an'ity fampahalalana ity. Ireo fepetra sy fampiasa amin'ny fampiasana ireo dia azo ovaina amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy fampandrenesana.